အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2004) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ amygdala တုံ့ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားသည်
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2004) မှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား
နတ် neuroscience ။ 2004 ဧပြီ;7(4): 411-6 ။ EPub 2004 မတ်လ7။
Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန် K သည်.
စိတ်ပညာဌာန၊ ၅၃၂ မြောက် Kilgo စက်ဝိုင်း၊ Emory University, Atlanta, Georgia 532, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ယောက်ျားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီးတုံ့ပြန်ကြသည်။ ဇကျနော်တို့ amygdala နှင့် hypothalamus တူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုကြည့်ရှုသည့်အခါမိန်းမတို့ထက်ယောက်ျား၌ပိုမိုပြင်းထန်စွာ activated ဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် T
အမျိုးသမီးများကပိုမိုနှိုးဆွမှုကိုအစီရင်ခံလျှင်ပင်သူသည်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုသည်လှုံ့ဆော်မှုများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါဒေသများတွင်သာကန့်သတ်ထားပြီး၊ လက်ဝဲ amygdala တွင်ညာဘက် amygdala ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြိုးကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် ventral striatal ဒေသများအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများဖြတ်ပြီးအလားတူ activation ပုံစံများ, ပြသခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် amygdala လိင်အစာစားချင်စိတ်မှတုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဇီဝအဓိကလှုံ့ဆော်မှု mediates ကြောင်းညွှန်ပြ; လူ့ amygdala ကိုလည်းကြိုတင်တိရိစ္ဆာန်တွေ့ရှိချက် paralleling, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏သတင်းများအရ သာ. ကြီးမြတ်အခန်းကဏ္ဍဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။